Window Screen - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Screen Window Hordhac screen suuqa kala A, screen cayayaanka ama duuli screen waa silig a birta, Maro adag, ama mesh kale fiber dardaro, fidiyey in jir ah oo alwaax ama bir, loogu talagalay in lagu daboolo furitaanka daaqad furan. Ujeeddada hoose waa in caleemaha, burburka, cayayaanka, shimbiraha, iyo xayawaanka kale soo galaan dhismaha ama qaab baaray sida balbalada ah, halka saamaxdo cusub hawada-socodka. guryaha intooda badan ee Australia, Maraykanka iyo Kanada leeyihiin screens on daaqadaha buuxsan,, whic ...
FOB Price: US $ 0,35 - 0.55 / Square Meter
Min.Order Tirada: 1 Roll / Rolls
Supply Kartida: 1000 Roll / Rolls per Day
screen suuqa kala A, screen cayayaanka ama duuli screen waa silig a birta, Maro adag, ama mesh kale fiber dardaro, fidiyey in jir ah oo alwaax ama bir, loogu talagalay in lagu daboolo furitaanka daaqad furan. Ujeeddada hoose waa in caleemaha, burburka, cayayaanka, shimbiraha, iyo xayawaanka kale soo galaan dhismaha ama qaab baaray sida balbalada ah, halka saamaxdo cusub hawada-socodka. Guryaha intooda badan ee Australia, Maraykanka iyo Kanada leeyihiin screens on daaqadaha buuxsan,, kuwaas oo inta badan waxtar leh in meelaha in ay leeyihiin dadka kaneecada waaweyn. Hore, screens in North America ayaa inta badan bedelay daaqadaha duufaanka galaas ee xilliga qaboobaha, laakiin hadda ay laba hawlood waxaa sida caadiga ah marka la isku daro duufaanka isku darka iyo screen daaqadaha, taas oo u oggolaan dhalooyinka iyo screen darfaha in ay kor iyo hoos u simbiriirixan.
Noocyada Of Screen Windownayaa Fabric
The alaabta ugu caansan ee loo isticmaalo wax baarista cayayaanka waa aluminium iyo Maro adag. Screen suuqa kala Aluminum guud ahaan waa la heli karo in aluminium dabiici ah ama midab dhuxusha codsatay; dhuxusha waa badan la arki karo ka yar. Maro adag waxaa laga heli karaa cirro iftiinka iyo sidoo kale midabada dhuxusha, dhuxusha mar bixiya daawashada fiican iyo muuqaalka. Maro adag waa ka raqiisan, oo uu leeyahay faa'iido ah ee aan "denting" marka garaaco ama riixay. Si kastaba ha ahaatee, mesh Maro adag yahay xoogaa ka badan Doolaal badan mesh aluminium, kuwaas oo ku madoobeeya muuqaalka dibadda ee daaqadda iyo yaraynaysaa qaddarka iftiinka banaanka ka kala qaado. Intaa waxaa dheer, screen Maro adag si degdeg ah hoos la gaadhista light UV, taasoo keentay in ay foodaraha iyo jebinta ka dib dhowr sano, ka duwan aluminium kaas oo aad u dheer socdaa.
Codsiyada u baahan xoog weyn, sida albaabada la baaray, nylon iyo baaritaanka caag sidoo kale waxaa laga heli karaa.
Baaritaanka cayayaanka naxaas ah wax badan oo qaali ah, laakiin siinaysaa adeeg aad uga dheer ka mid aluminium ama Maro adag. Markii ugu horeysay ku rakibidda screen uu furmo suuqa, waxa ay leedahay midabka ah oo dahab ah oo dhalaalaya, this cimilo in dhuxusha ah unobtrusive madow sano ah ama ka yar gudahood. Naxaas waa xoogaa more adkaysi u denting badan aluminium. In ka yar difaan screen caadiga ah waxaa ka mid ah copper, naxaas ah, ahama, iyo bir galvanized.
Waxa intaa dheer in baaritaanka cayayaanka, noocyada screen denser in sidoo kale hoos u iftiinka qoraxda iyo faa'iido kulaylka ayaa laga heli karaa. Waxay bixiyaan kaydka weyn tamarta cimilooyinka kulul.
Ma-wax-uqabso xirmooyinka screen iyo jir bedelka aad looga heli karaa dukaamada hardware iyo hagaajinta guriga. Click waxaa badanaa ka kooban dhinac si toos ah aluminium (taas oo laga gooyn karaa in ay size) iyo qobays geeska caag ah. Xirmooyinka bedelka Screen sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin kitaabkii duudduubnaa ah dhar baaritaanka nylon iyo sahayda deeqsi ah spline caag.
Previous: Maro adag Plain-xidhkii Wire dhaliyay
8x8-xidhkii Wire Screen
Maro adag Window Screen
galvanized Screen Iron Window
caaga Window Screen
Screen ahama Wire mesh
Screen ahama Steel Window
Waslad Wire Screen
Dhismaha mesh Panel
Welded mesh Panel-Hot-dhex Afte galvanized ...
Hot Laydhka Wire galvanized